Alvaro Morata, Rodrigo, Iago Aspas Oo Ku Tartamaya Maaliyada No.9 Ee Xulka Spain Ee Koobka Adduunka – Halkee Ayuuse Ku Danbeyn Doonaa Diego Costa? – WWW.Gool24.net
Alvaro Morata, Rodrigo, Iago Aspas Oo Ku Tartamaya Maaliyada No.9 Ee Xulka Spain Ee Koobka Adduunka – Halkee Ayuuse Ku Danbeyn Doonaa Diego Costa?
Morata ayaa ah xiddiga hogaaminaya tartanka loogu jiro booska joogta ah ee weerarka xulka Spain. Waxa uu dhaliyay sideed gool 15 kulan uu ciyaaray, waxaana taas ka sii muhiimsan inuu ka soo kabsaday inuu ahaa ciyaaryahan kursi keyd. Chelsea waxa uu ku dareemayaa inuu yahay xiddiga hogaaminaya weerarka taasoo kalsoonidiisa kor u soo qaaday.
Iago Aspas isna sidaasi ugama danbeeyo. Waxaana uu lugta kula jiraa tartanka, mana doonayo inuu lugta kala baxo ilaa iyo uu raaco diyaarada Ruushka. Xiddigaan waxaa kooxda Celta Vigo ku qabsaday Maxi Gomez isbuucyadii ugu horeysay xilli ciyaareedka, laakiin tan iyo bartamihii bishii October Aspas ayaa dib u helay qaab ciyaareedkiisii fiicnaa isagoo dhaliyay lix gool afar kulan gudaheed.
Rodrigo ayaa isna ku jira qaab ciyaareedkii ugu fiicnaa waayihiisa ciyaareed, sida Simone Zaza waxa uu wacdarro ku hoos dhigayaa tababaraha Valencia Marcelino isagoo dhaliyay sideed gool 12 kulan uu saftay.
Waxa kaliya ee su’aasha ay dulsaaran tahay waa Diego Costa. Waa mid ka mid ah weeraryahanada ugu sareeya caalamka, sidaasi oo ay tahay marnaba lama qabsanin qaab ciyaareedka tiki-taka ee Spain. Costa ayaan awoodin inuu u dheelo Atletico Madrid ilaa iyo bisha Janaayo, sidoo kalena Spain ma aysan tabin.
Dhanka goolhayaha wax muran ah kama taagna, David de Gea ayaa ah goolhayaha koowaad, halka Kepa uu doonayo inuu talaabo weyn soo qaado iyadoo Pepe Reina uu khibrad ku soo kordhin karo qolka labiska.
Waxaa ka horeeya labo daafac dhexe oo kala duwan balse awoodooda ay isku dheelitiran tahay Gerard Pique iyo Sergio Ramos, sidaasi darteed tartan badan kama jiro dhanka daafaca. Si la mid ah khadka dhexe. Saul ama Asier Illaramendi ayaa u fadhin kara Sergio Busquets, halka Suso iyo Luis Alberto ay ku biiri kaaan kubadsameeyayaasha tirada badan ee xulka Spain.